Qaybta: 7aad ee Taxanaha Ramadaanka
Asalamu caleykum yaa muslimiin
Marka hore Ramadan Wacan. Wabacdi, sidaa la wada soconaba waxaaa ku dhex jirnaa tobankii habeen ee bisha Ramadan ugu danbeysay, tobankaas habeen oo ay ku jirto habeen la yiraahdo "Habeenkii Leylatul-Qadri". Marka waxaa su'aal u baahan inaa is weydiino maxey habeenkaas habeenada kale uga duwantahay ama uga fadli badan tahay?
waxaa ka mid ah....
(2) waa habeenkii Quraanka Lawxul-Maxfuudka laga soo dejiyey, iyadoo la keenay meel la yiraahdogurigii Cizziga iyo Sharafta, dabadeedna qayb-qayb Nabiga SCW loogu soo dejiyey, muddo saddex iyo labaatan sano gudohood ah.
....oo ay macnaheedu tahay "Ilaaheeyoow waxaad tahay Ilaah cafin badan, jecelna cafinta, ee i cafi." Waxaa xaddiiska wariyey Axmed Ibnu Maajah iyo Tarmidi.
kulaabo Qaybta 6aad | Akhri Qaybta 8aad.... Guji